Kuratidza zvinyorwa neelebheri kugadzirwa kabhodhi
Akakosha madhizaiki munhoroondo yepasirodhi chirimwa anonyanya kuisirwa mishini yekurongedza muna1970 na1989, iyo yakaunza…
EMBA ndiye akakura uye anonyanya kukosha mutengesi wezvigadzirwa zvemapepa akagadzirwazve, achigadzira chakakoshesa kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. EMBA ikambani yeCzech ine tsika refu uye ine mutoro yekuita munharaunda uye nharaunda. Zvigadzirwa zvaro zvakagadzirwa zvinogadzira pepa remarara uye zvinogadziriswazve. Kuburikidza nezvigadzirwa zvayo, EMBA inobatsirawo mukuchengetedza uye kuchengetedza tsika nemagariro wenhoroondo munyika dzakawanda. Semunhu mukuru mushandirwi wedunhu, inoona basa rayo kuvandudza nzvimbo dzakachengeteka uye dzakachengeteka dzekushanda dzevashandi vayo, pamwe nekuzvipira mukupa mukugadzikana munharaunda yedunhu rese.
Kutanga kwenhoroondo cardboard Paseky nad Jizerou kusvikira gore 1882, kana paiva Rösslerovými hama nheyo fekitari kuti dzakaitwa nemaoko chena makadhibhokisi kavha zvigadzirwa kuti girazi indasitiri muna Jablonec mudunhu. Nokuti wose akatevera Danho oupenyu hwokuratidza kuwedzera chekambani kugadzirwa chirongwa uye kugadzirwa nzvimbo.
Akakosha zviitiko zvake ...